9 loko vovoka manasongadina ny palitao marefo sy ny birao fanitsiana ny kontour, ny makiazy vita amin'ny vovoka amin'ny tarehy amin'ny endriny maharitra mandritra ny fotoana lava.
Voalohany:Retouch tonga lafatra: Amin'ny alàlan'ny fampiasana paleta mena miloko enina amin'ny saokanao, amin'ny takolaka ary ny orona, dia afaka mamorona endrika voasokitra ianao, manampy anao hanova ny tsy fahalavorarian'ny tarehy ary manampy tarehy, ary ampio famirapiratan'ny endrik'ireo makiazy isan-karazany.
Ny volavolan-tsakafo mora mifangaro sy maharitra dia azo esorina amin'ny paoma amin'ny takolaka kely mba hametrahana loko marevaka, na hatsangana mba hahitana loko miloko somary manaitaitra sy feno loko kokoa. Manolotra ny fahamoran'ny vovoka sy ny lokon'ny crème.
Roa voalohany:Fomba fampiasana azy: Ampiasao ny borosy tarehy voaravaka, esory amin'ny takolaka, ny sisin'ny orona ary ny saokany ny varahina mba handrafitra ny endrika. Apetaho amin'ireo paoma eo amin'ny takolakao ny lokanga, ary afangaro ambony sy mankany amin'ny sofina mba hahazoany jiro voajanahary.
Mamorona fijery voajanahary miaraka amina satin mikasika ny takolaka Izy io dia manome mavokely mavokely peachy ho an'ny endriny maloto
Manampia pop loko marevaka amin'ny takolaka
Mety tsara amin'ny fampiasana isan'andro, hetsika manokana na fotoana sns sns ny makiazy rehetra. Toy ny matihanina, makiazy amin'ny mariazy, makiazy fety na makiazy mahazatra sns.
JOYO dia manana izay ilainao mba hamoronana fototra fijery, aloky ny maso, borosy makiazy, fanafenana ary fampisongadinana hamoronana fiainana mahafinaritra.
Telo voalohany:Tmakiazy maivana, maivana ary landy, maoderina manintona, manana anjara asa fanovana kosmetika tena tsara, safidy tena ilaina ho an'ireo Eoropeana sy Amerikanina tia ny hatsaran-tarehy, hamorona "rafitra matotra matotra" (hatsarana tsy misy habibiana).
Efatra voalohany:Fonosana - boaty baoritra miboridana misy loko mena miloko 9, ny haben'ny lapoaly tsirairay dia 3.65 sm * 3.65 cm. Kalitao avo lenta, mora ampiasaina. Tena mety amin'ny fampiasana matihanina na amin'ny fampiasana isan'andro.
Manonofy - malefaka, malefaka ary mifangaro tsara. Anti stripe sy anti foule. Tena mety amin'ny artista makiazy sy izay maniry hanandrana loko isan-karazany amin'ny vovoka makiazy fa tsy handany vola irery hividianana fototra.
Endri-javatra - mitondrà famirapiratra voajanahary sy mahasalama amin'ny loko amin'ny hoditra, izay azo hanaovana irery na misy sosona hampitomboana ny halaliny sy ny tanjaka. Omeo loko mangarahara sy voajanahary. Mampiasà loko mangarahara mba hialana amin'ny fahatsapana mavesatra.
Loko - andiam-panamboarana maoderina maivana, karazana lamba miloko 9, hamela anao hiala amin'ny hoditra mainty. Ity tarehy make-up 9 miloko Blush Powder ity dia mahatonga ny hoditra ho malefaka sy mamelombelona, ​​mamiratra voajanahary ary mahasalama.
Mahafinaritra - tonga lafatra amin'ny fanamboarana Party / make-up / make-up amin'ny mariazy sns. Vodisa Face blush dia hanampy anao hanintona olona marobe amin'ny fety na amin'ny fotoana hafa. Loko isan-karazany azonao isafidianana.
Teo aloha: Solomaso maso-BD15-DW
Manaraka: Fanamboarana tarehy-BD-CH
Blush borosy tsara indrindra
Telefaona: + 86-755-21047959
Adiresy: Room 501, No. 279-6, Village Dabutou, Communityyuansha Community, Guanhu Street, Distrikan'i Longhua
JOYO © Zo rehetra voatokana. Vokatra asongadina, Sitemap, Lipotra Mini, Matte Eyeshadow Palette, Solomaso maso volamena, Eyeshadow tsara indrindra amin'ny crème, Borosy tsara indrindra, Lokomena savony, Vokatra rehetra